Iyo File Explorer isiri kushanda pane yako Windows 10 PC? Iyo File Explorer haisi kuvhura kana otomatiki kuvhara munguva pfupi mushure mekutanga? Une chero imwe nyaya maererano neiyo File Explorer mu Windows 10? Muchirongwa ichi, tichaona maitiro ekugadzirisa nyaya dzeFaira Explorer mu Windows 10.
Kune nzira dzinoverengeka dzekugadzirisa isiri kushanda File Explorer mu Windows 10. Dzinotevera ndidzo nzira shanu dzekunetseka uye kugadzirisa Faira Explorer zvirevo mukati Windows 10.
Ndokumbirawo uedze zvinotevera mhinduro mune yavo marongero akanaka.
CHERECHEDZA: Isu tinofungidzira kuti iwe wakave nechokwadi chekuti PC yako haina mavhairasi uye imwe software yakaipa. Kana zvisiri, ndapota nyatso tarisa PC yako ne antivirus yakanaka kutanga usati waedza dzimwe mhinduro.
ZVINOKOSHA: Kana iyo File Explorer iri kuvhura zvishoma, ndapota tarisa kune yedu Faira Explorer kuvhura zvishoma nezvishoma mukati Windows 10 mutungamiri.
Solution 1 ye8
Dzorerazve File Explorer uye tangazve PC yako
Kana iyo File Explorer isiri kupindura kana kushanda nemazvo, unogona kuyedza kutangazve iyo File Explorer. Kuti utangezve iyo File Explorer:
Step 1: Vhura Mutariri Webasa kushandisa Ctrl + kusuduruka + Esc kiyi.
Step 2: Click More details kana iwe usingakwanise kuona izere vhezheni yeTask Manager.
Step 3: pasi Nzira tab, kurudyi on Windows Tsvaga uye wobva wadzvanya Dzorerazve sarudzo yekutangazve iyo File Explorer.
Kana iwe usingakwanise kuona Windows Yekutsvagisa kupinda pasi peMaitiro, ndapota vhura iyo File Explorer nekudzvanya pane yayo icon pane taskbar kana kushandisa Windows logo + E wozoitangazve muTask Manager.
Solution 2 ye8
Update Windows 10 kusvika kumushanduro wapfuura
Kana usiri kumhanya yazvino vhezheni ye Windows 10, isu tinokurudzira iwe kusimudzira kune yazvino vhezheni sezvo Microsoft inogadzirisa yakawanda yenyaya dzinozivikanwa kuburikidza nekuvandudzwa. Enda kune Settings app> Kwidziridzo & chengetedzo > Windows Update, uye ipapo tora Chengetedza zvinyorwa bhatani.
Solution 3 ye8
Kugadzirisa system mafaira uchishandisa System File Checker
Iyo File Explorer inogona kunge isiri kushanda nemazvo nekuti rimwe remafaira sisitimu rakaora kana kushayikwa. Unogona kuedza kumhanyisa yakavakirwa-mukati System File Checker chishandiso mu Windows 10 kuongorora, uye kugadzirisa mafaira akakuvara kana asipo.
Regedzera yedu maitiro ekumhanyisa System File Checker kugadzirisa zvakashata kana kushaya mafaera mu Windows 10 chinyorwa chekutora-nhanho nhungamiro.
Solution 4 ye8
Dzorera Windows 10 kusvika kune imwe yapfuura
Kana Sisitimu Kudzorera chimiro ikashandurwa paPC yako, unogona kuedza kudzorera Windows 10 kune zuva rekutanga apo raive richishanda mushe. Tevedza madhairekisheni mune edu nzira yekudzorera Windows 10 kune rimwe zuva rapfuura chinyorwa chenzira.
Solution 5 ye8
Gadzira account nyowani yemushandisi
Kana iwe uine chete nhoroondo yemushandisi paPC yako, gadzira account nyowani yemushandisi kana account yeMicrosoft wobva watarisa kuti File Explorer rinoshanda sezvaitarisirwa here. Kana hongu, unogona kuedza kufambisa data rese kubva kuaccount yako yazvino kuenda kuaccount nyowani. Kubata chete ndekwekuti ungangoda kuisa (mamwe) ako maapplication zvekare eakaundi nyowani.
Solution 6 ye8
Sununguka kumusoro drive nzvimbo
Kana yako system yekutyaira kana chero imwe drive isina nzvimbo yemahara, File Explorer inogona kusashanda nemazvo. Sunungura imwe nzvimbo nekuyedza madhairekisheni mune edu 16 nzira dzekusunungura yekutyaira nzvimbo mu Windows 10 chinyorwa.
Solution 7 ye8
Mhanya Sisitimu Yekugadzirisa chinetso
Iko kune yakavakirwa-mukati Sisitimu Yekugadzirisa chinetso mukati Windows inoshanda sisitimu iyo inogona kukubatsira kugadzirisa File Explorer nyaya, zvinoenderana neMicrosoft Kuwana chinetso cheSystem Maintenance.
Step 1: Vhura Control Panel. Chinja Wona ne to Zvidhori zvidiki.
Step 2: Click Troubleshooting. Mune yekuruboshwe-pane, tinya View zvose kuona Kugadziriswa kweSystem pakati pevamwe vanonetsa.
Solution 8 ye8
Kugadzirisa Windows 10 kuisirwa pasina kurasikirwa nedata nemaapp
Kugadzirisa Windows 10 inofanira kushandiswa senzira yekupedzisira. Chinhu chinowanikwa mu Windows 10 inokutendera kuti ugadzirise Windows 10 pasina kudzima data rako uye maapplication akaiswa kubva kuChitoro. Ziva kuti kugadzirisa yako Windows 10 PC inogona kubvisa ako desktop desktop.
Gadzirisa Explorer.exe Kanganiso yekushandisa pane Windows 10